Xisaabtan MOOC waxa loogu talagalay inay ku taageerto u gudbida dugsiga sare una gudubta tacliinta sare.
Ka kooban 5 qaybood, diyaarintan xisaabtu waxay kuu ogolaanaysaa inaad xoojiso aqoontaada oo kuu diyaariso gelitaanka tacliinta sare.
MOOC-dan sidoo kale waa fursad aad ku qiimayso aqoontaada dhamaadka dugsiga sare iyo in aad dib u eegis ku sameyso fikradaha xisaabeed ee lama huraanka u noqon doona isdhexgalka wanaagsan ee tacliinta sare.
Ugu dambeyntii, waxaad ku tababaran doontaa xallinta mashaakilaadka, taas oo noqon doonta hawl aad muhiim u ah waxbarashada sare. Hababka qiimaynta kala duwan ayaa la bixiyaa: su'aalo kala doorasho badan, layliyo codsi oo badan oo lagu tababaro, iyo mashaakilaadka la xalin doono, kuwaas oo ay qiimayn doonaan ka qaybgalayaashu.
Ururinta Xisaabta: 5- Isdhexgalka Diisambar 19, 2021Tranquillus
horeUrurinta Jirka: 4- Joometric iyo mowjadaha indhaha
socdaUrurinta xisaabta: 4- Sababaynta soo noqnoqoshada iyo taxanaha tirada